मह जोडीद्वारा ‘नेपालको लागि सय दिन’ अभियान सुरु, यस्तो छ सन्देश – Sajha Post
मह जोडीद्वारा ‘नेपालको लागि सय दिन’ अभियान सुरु, यस्तो छ सन्देश
साझापोस्ट	१ पुष २०७६ १९:०७
काठमाडौं, १ पुस । चर्चित हास्यकलाकार जोडी मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको जोडी ‘मह जोडी’ले ‘नेपालको लागि सय दिन’ नामक नागरिक अभियान सुरु गरेका छन् ।
मंगलबार साँझ हरिवंश आचार्यले केही सन्देशहरुसहित उक्त अभियानको घोषणा गरेका हुन् । आचार्यले मह जोडीको तस्बिरसहित केही महत्वपूर्ण सन्देशहरु सार्वजनिक गर्दै यसलाई कम्तिमा सय दिनका लागि पछ्याउन आह्वा नगरेका छन् ।
‘आजैदेखि न्यूनतम सय दिनको लागि यो अभियानमा सहभागी बनौँ । सोच बदलौँ । देश बदलौँ,’ उनले लेखेका छन्, ‘गरिब होईन धनी बनौँ । कमजोर होईन शक्तिशाली बनौँ । किनकि याद गरौँ- हामी गरिब छौँ लाचार हौईनौं । कमजोर छौँ तर, कायर होइनौं ।’
यस्तो छ मह जोडीको सन्देश-
याद गरौँ – हामी गरिब छौँ । तर लाचार होईनौँ । हामी कमजोर छौँ । तर कायर होईनौँ । जसरी ५१ स्वर्ण जित्दा हाम्रो छाती गर्वले फुल्छ, सुस्ता र कालापानीमा हाम्रो सीमा मिचिँदा हाम्रो छाती कुँडिनु पर्छ । विदेशको हेपाहा प्रवृतिविरुध्द हामी सामान्य नागरिक सीमामा गएर उभिन नसकौँला तर, यो आक्रोशलाई शक्तिमा बदल्दै हामीले आत्मसम्मानको लडाँई लड्नुपर्छ ।
१. आजैदेखि इन्डक्सन चुल्हो, इलेक्ट्रिक केट्लि र इलेक्ट्रिक गिजरको प्रयोग विस्तारै बढाऔँ । विद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदै पेट्रोलियम पदार्थमा भारतमाथि निर्भर हुन छाडौँ । विद्युतीय उपकरणको प्रयोग फाईदाजनक पनि छ ।
२. विदेशी चलचित्रहरु पैसा र समय खर्च गरी गरी नहेरौँ । त्यसले तपाईको वा तपाईको सन्तानको व्यक्तित्व विकास हुने पनि होईन । सोहि रकम जोहो गरी आफ्नो शहर बजार वरिपरिका रमणीय स्थलमा वनभोज जाऔँ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरौँ । वा खेलकूद प्रतियोगिताहरु (शहिद स्मारक लिग, पोखरा प्रीमियर लिग आदि) अवलोकन गरी नेपाली खेलाडीहरुको हौसला बढाऔँ । ‘सलमान खान’हरुसँग होईन आफ्नाे परिवार र प्रियजनहरुसँग समय बिताऔँ । खुशी साटौँ ।
३. विदेशी उत्पादनहरुको खपत घटाऔँ । ‘पार्ली जी’ को सट्टा ‘नेबिको’, ‘म्यागी’ को सट्टा ‘रारा’ र स्याम्पु, दन्त मञ्जन्लगायत विलासी सामग्री सकेसम्म स्वदेशी, नभए अन्य मित्र राष्ट्रका प्रयोग गरौँ । महंगो भए मितव्ययी होऔँ । लहराँउदो केश, टल्किएको दाँत र बासना आउने शरीर- निहुरिएको शीरभन्दा महत्वपूर्ण हुँदैन ।
४. आफ्नो आँगन वा कौशीहरुमा सानै परिमाणमा भएपनि तरकारीजन्य खेती गरौँ । लाखौँ घर परिवार यो अभियानमा जोडियौँ भने करोडौँ रुपैयाँ जोगिन्छ । तरकारी खेतीले तपाईको मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पनि पार्नेछ ।
हामीले घर बसेरै गर्न सक्ने यी कुराहरु गर्‍यौं भने हाम्रै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गर्न सक्नेछौँ । विदेशीलाई सोच्न बाध्य बनाउन सक्नेछौँ । हामीले दुःख गरी कमाएको पैसा वा हाम्रा आफन्तजनले विदेशमा रगत पसिना बगाई नेपाल पठाएको पैसा पुनः विदेशमै जान रोक्न सक्नेछौँ । बिदेशिएका लाखौँ आफन्तजन र आफ्ना दुःखहरु सम्झिऔँ । कफिनमा फर्किएका लाशहरुप्रति बफादार होऔँ ।
आजैदेखि न्यूनतम सय दिनको लागि यो अभियानमा सहभागी बनौँ । सोच बदलौँ । देश बदलौँ । गरिब होईन धनी बनौँ । कमजोर होईन शक्तिशाली बनौँ । किनकि याद गरौँ- हामी गरीब छौँ लाचार हौईनौं । कमजोर छौँ तर, कायर होइनौं ।
नेपालको लागि सय दिन
संसदमा मिनेन्द्र रिजालले सोधे–एमालेले कहिले लोकप्रिय मत प्राप्त गर्या हो ?
मन्त्रीले बोलेको असंसदीय शब्द हटाउन सभामुखले गरे रुलिङ, बैठक शुरु
१५ मिनेटका लागि स्थगित भएको संसद बैठक अझै शुरु भएन
आपुर्ति मन्त्री बडुले ओलीको बोलीलाई स्तरहिन भनेपछि संसदमा हंगामा
काठमाडौंलाई विश्वकै सुन्दर शहर बनाउन प्रयास गर्छु: बालेन साह
श्रीमतीको हत्या गर्ने पूर्व डिआईजी कोइरालाको कैद घटाउने आफ्नै फैसला सर्वोच्चले उल्टायो, अझै साढे ११ वर्ष जेल बस्नुपर्ने
एमाले अध्यक्ष ओलीले तोडे आफ्नै नाममा रहेको रेकर्ड
एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति मन्त्री झाँक्रीको व्यङ्ग्य, म कुर्चीमै नबसी साढे तीन घण्टा बोल्न सक्छु
यस्तो छ काठमाडौं महानगरको अन्तिम परिणाम, बालेनलाई कोटेश्वर क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै मत
एक्सनमा हर्क : कुचो बोकेर आउन नगरबासीलाई आह्वान
बुढीगंगा नगरपालिकामा पुनः निर्वाचन हुने, जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीलाई कारवाही गर्न आयोगको निर्देशन
तनहुँको व्यास नगरपालिकामा पुनः मतगणना होला ? यस्तो आयो अदालतको आदेश